အဆင့် Tracker - pedometer | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » ကျန်းမာရေး & Fitness Apps ကပ » အဆင့် Tracker - pedometer, အလေးချိန်ဆုံးရှုံးမှုများအတွက် Walking
အဆင့် Tracker - pedometer, ကိုယ်အလေးချိန် APK ကိုများအတွက် Walking
အကောင်းဆုံးအခမဲ့သင့်ရဲ့နေ့စဉ်ခြေလှမ်းများကိုခြေရာခံဖို့ pedometer, လမ်းလျှောက် & ကိုယ်အလေးချိန်, ခြေလှမ်းများမှတ်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခြေလှမ်း tracker မှသင်၏ကယ်လိုရီလောင်ကျွမ်းနှင့်လမ်းလျှောက်အကွာအဝေးတွက်ချက် - တစ်လွယ်ကူသော-to-အသုံးပြုမှု pedometer, ခြေလှမ်းတန်ပြန် & Walker tracker app ကို။ အားလုံးဤအချက်အလက်အလေးချိန်ဆုံးရှုံးမှုများအတွက် clearly.Walking ဂရပ်များတွင်ပြသလိမ့်မည်! တိုင်းခြေလှမ်းရေတွက်! ရုံကျွန်တော်တို့ရဲ့ app ကိုရိုက်ထည့်ပါနှင့်သင့်နေ့စဉ်ခြေလှမ်းများအစီအစဉ်ကိုစတင်ပါ, ထို့နောက်အလိုအလျောက်သင့်ရဲ့ခြေလှမ်းရေတွက်စတင်သည်။ သင့်ရဲ့ဖုန်းကိုသင်တို့နှင့်အတူရှိသောအခါသူကတောင်သင့်ရဲ့ screen ကိုသော့ခတ်သို့မဟုတ်သင့်ဖုန်းကိုသင့်လက်၌မသည်, သင့်ခြေလှမ်းများ Auto-မှတ်တမ်းတင်နိုင်ပါတယ်။
။ real-time အဆင့်ကောင်တာ
သငျသညျလမ်းလျှောက်အဖြစ်သင့်ခြေလှမ်းများခြေရာခံ Built-in pedometer (ခြေလှမ်းများ၏နံပါတ်, အကွာအဝေး, အမြန်နှုန်းနှင့်ကယ်လိုရီစတာတွေကိုမီးရှို့) သင့်နေ့စဉ်ကြံ့ခိုင်ရေးလှုပ်ရှားမှုများကိုအသံဖမ်း။ သငျသညျမထိုက်မတန်ကိုစောင့်ရှောက်ကူညီပေးဖို့ထိရောက်သောခြေလှမ်းတန်ပြန် app ကို!
နေ့စဉ်ခြေလှမ်းများအဆင့်ပိုမိုလမ်းလျှောက်ခြင်းနှင့်သင်၏မိတ်ဆွေများ '' အဖုံးသိမ်းပိုက်ဒီမှာသင်၏မိတ်ဆွေများနှင့်အတူယှဉ်ပြိုင်! အတူတကွလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဖို့သင်၏မိတ်ဆွေများ Invite!
ကြာချိန်, အကွာအဝေး, ကယ်လိုရီသို့မဟုတ်ကြားကာလလေ့ကျင့်ရေးအဘို့သင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်သတ်မှတ်ပါ။ သင့်ရဲ့တိုးတက်မှုကိုစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်အချိန်မရွေး, နေရာမရွေးသင့်ရဲ့အချိန်ဇယားကို adjust!
အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုကာလအတွင်းတစ်ဦးချင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနှင့်အတူနေသည်ဟု BMI ၏တွက်ချက်မှုများနှင့်ခန္ဓာကိုယ်အဆီ။ သငျသညျလမ်းလျှောက်ခြင်းဖြင့်ကိုယ်အလေးချိန်ကိုကူညီခန္ဓာကိုယ်မက်ထရစ်အတွက်စံချိန်အပြောင်းအလဲများကို။
အလေးချိန်, အလေ့အထများနှင့်ပိုပြီးခြေရာခံ။ သင့်ရဲ့နေ့စဉ်အစီရင်ခံအချိန် Customize, သင့်နေ့စဉ်ခြေလှမ်းများရအလိုအလျှောက်အချိန်ပေါ်အစီရင်ခံစာများအဆင့်။
သင်အမြဲသင့်ရဲ့မထိုက်မတန်ဖြစ်စဉ်ကိုခြေရာခံရန်အကြောင်းကြားစာ bar မှာသင့်ရဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုစစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။ သင့်ရဲ့ခြေလှမ်းများ, လှုပ်ရှားမှုနဲ့ကယ်လိုရီမီးလောင်ခြေရာခံ။ တိုင်းခြေလှမ်းရေတွက် Make နှင့်ပိုပြီးကိုယ်အလေးချိန်။
။ ရောင်စုံ Themes
multi ရောင်စုံ themes များပြောင်းလဲသွားပါလိမ့်မည်ထိုနေ့၏အချိန်ပေါ်တွင်မူတည်သည်။ သင်ဤခြေလှမ်း tracker နှင့်သင်၏ခြေလှမ်းရေတွက်အတွေ့အကြုံကိုခံစားရန်နံနက်, နေ့ & ညဥ့်3ကွဲပြားခြားနားသောဆောင်ပုဒ် mode ကိုစူးစမ်းလေ့လာနိုင်ပါတယ်။
သငျသညျပစ္စည်းဒီဇိုင်းနှင့်အတူလွယ်ကူသော UI ကိုတွေ့ကြုံခံစားပါလိမ့်မယ်, ငါတို့ခြေလှမ်း tracker ဒီဇိုင်းကိုအချိန်မီအသုံးပြုသူများသည် '' ထင်မြင်ချက်များအားဖြင့်တိုးတက်ပါလိမ့်မည်။
ထောက်ပံ့အားလုံး features တွေ 100% အခမဲ့ဖြစ်ကြသည်။ သင်သည်ထိုသူတို့အဘို့အပေးဆောင်စရာမလိုဘဲအားလုံး features တွေကိုသုံးနိုင်သည်။
သင့်ရဲ့ခြေလှမ်းများ Count နှင့်သင့်အဆင့်အထိအဆင့်မြှင့်တင်ရန်ရေတွက်ခြေလှမ်းများ၏တိကျမှန်ကန်မှုကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်။ ရည်မှန်းချက် Set, အောင်မြင်မှုနှင့်အဆင့်အထိတက်ရ။
ထိရောက်စွာအဆင့် Tracker အသုံးပြုနည်းကိုဘယ်လို
- သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအခြေအနေပေါ်တွင်သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ကြံ့ခိုင်ရေးအစီအစဉ်အခြေစိုက်စခန်းတင်ထားရန်, သင့်ရဲ့အမြင့်နှင့်အလေးချိန်ရိုက်ထည့်ခြင်းဖြင့်ခြေလှမ်းတန်ပြန် sensitivity ကို Adjust ။
- Facebook ကိုချိတ်ဆက်ရန်, ဒီမှာသင်၏မိတ်ဆွေများနှင့်အတူအဆင့်အတန်းသတ်မှတ်! တစ်ဦးချင်းစီကတခြားလှုံ့ဆျောဖော်ရွေပြိုင်ပွဲတည်ထောင်ရန်!
- သင့်အကြောင်းကြားစာ bar မှာသတ်မှတ်ထားတဲ့အလံကို setting အားဖြင့်သင့်ကို real-time ခြေလှမ်းများစစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။
- သင်ဆန္ဒရှိအဖြစ် Start ကိုပိုမိုလွယ်ကူစွာရေတွက်ခြေလှမ်း Pause နဲ့ရပ်တန့်! ပြင်သာပြောင်းသာခြေလှမ်းများ၏နံပါတ်ရန်သင့် Activate အချိန်နှင့် access ကိုစစ်ဆေးပါ။
- ခြေလှမ်းရေတွက်ခြင်းနှင့်လှုပ်ရှားမှုခြေရာခံခြင်းနှင့်အတူအလေးချိန်ရှုံးသည်။ သင့်ရဲ့လမ်းလျှောက်အလေးချိန်ဆုံးရှုံးမှုအစီအစဉ်ကိုယနေ့စတင်ပါ! သင့်ရဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြံ့ခိုင်မှုကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေ, နှလုံးခုန်နှုန်းနှင့်အဆုတ် function ကိုခိုင်ခံ့စေရိုးရှင်းသောစစ်ဆင်ရေးမှတဆင့်ကြွက်သားအစွမ်းသတ္တိကိုမြှင့်တင်ရန်။ သင်သည်သင်၏နေ့စဉ်ခြေလှမ်းကောင်တာနှင့်အတူကျန်းမာသန်စွမ်းလူနေမှုပုံစံစတဲ့ရန်လမ်းပေါ်လိမ့်မယ်!
1 ။ ယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့်အသုံးဝင်မှုရှိစေရန်၏တိုးတက်မှုများ။
2 ။ fixed bugs ။
အဆင့် Tracker - pedometer, အလေးချိန်ဆုံးရှုံးမှုများအတွက် Walking
12.41 ကို MB